Madagascar Matin » Antsirabe Renivohitra – Nandray ny tambin-karama ireo Sefo Fokontany
Mba mpiasa tena miaritra tokoa raha ny sefo fokontany satria tsy mba voafaritra mazava toy ny an’ny mpiasa rehetra ny fotoana andraisana ny valin-katsembohana avy amin’ny kaominina fa izay fotoana amoahan’ny tompon’andraikitra izany. Tsy karama mahavelona fa mbola antsoina amin’ny hoe tambin-karama ihany koa. Ho an’ny ao amin’ny renivohitry ny faritra Vakinanaratra dia natomboka omaly alarobia 22 febroary tolakandro ny fizarana ny vola ary hotohizana isam-bolana araka ny nambaran’ny Ben’ny Tanàna Razanakolona Paul. Matetika rehefa misy ilain’ny fitondrana ny olom-pokotany izany vao avoaka ny volan’izy ireo. Rehefa antomotry ny fifidianana, ohatra, dia hain’ny mpitondra tokoa ny mahita ny vondron’olona ifotony ka manao izao fambaboana ny fon’ny vahoaka rehetra izao. Saingy araka ny loharanom-baovao dia tsy mifandray amin’izay ity hetsika nataon’ny avy ao amin’ny kaominina ity fa efa fanao’izy ireo fa nisy fiatoana kely dia izao naverina izao indray ary efa nankatoavin’ny mpanolo-tsaina ny hamerenana izany. Volan’ny kaominina madiodio no andoavana izany amin’ireo sefo fokontany. Nandritra ity fizarana tambin-karama ity moa no nanamafisan’ny Ben’ny Tanàna fa mbola izy aloha no mitantana ny tanàna hatramin’izao, manoloana ilay fampiatoana nataon’ny mpanolo-tsaina azy teo iny.